Madagascar, fihoaram-pefy, tsy fanarahan-dalàna – Mpitsara fito, greffiers telo nandraisana fepetra nosaziana – Taratra 16 janvier 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgacheMadagascar, fihoaram-pefy, tsy fanarahan-dalàna - Mpitsara fito, greffiers telo...
Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgacheHarimisa Noro VololonaNEXTHOPERANARISON Tsilavo
Madagascar, fihoaram-pefy, tsy fanarahan-dalàna – Mpitsara fito, greffiers telo nandraisana fepetra nosaziana – Taratra 16 janvier 2019
Mitohy ny hetsika fanadiovana eo anivon’ny tontolon’ny fitsarana. Niakatra teo anivon’nyFilankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) ireo tsy nanara-dalàna sy nihoa-pefy. Tao ireovoasazy sy voaroaka amin’ireo mpitsara sy mpirakidraharaha ary mpandraharaha nyfonja.10 ireo mpitsara niakatra filankevi-pitsipi-pifehezana (Codis). Nahemotra ny mombaireo roa. Voatsara ny valo ary afaka ny iray. « Fito ireo mpitsara tsy maintsy nandraisanafepetra sy nosazina teo anivon’ny Codis », hoy ny minisitry ny Fitsarana, i Harimisa NoroVololona, omaly tetsy Anosy. Ankoatra izany, samy voasazy ireo mpirakidraharaha fitsaranamiisa telo niakatra Codis ary 23 kosa ireo mpandraharaha fonja ka nisy ny voaroaka amin’izyireo raha mbola mitohy ny an’ny sasany.Mbola miato amin’ny asany i Fanirisoa Ernaivo.Manampy ireo, mbola mihantona amin’ny asany amin’ny maha mpitsara azy iFanirisoa Ernaivo, araka ny nambarany.Ankoatra izany, notsiahivin’ny minisitra ny zava-bitan’ny minisitera tao anatin’nyenim-bolana nitantanany. Teo ny fanamboarana na koa ny fanavaozana sy ny fanitarana nyfotodrafitrasa toy ny fonja sy ny biraon’ny mpitsara. Anisan’izany ny any Vangaindrano sy nyany Moramanga. Teo koa ny ho an’ny eto Antananarivo amin’ny birao sy ny tamboho etsyamin’ny fitsarana Anosy. Ny nananganana ny rantsam-pitsarana miady amin’ny kolikoly(Pac) sy ny rantsana hiady amin’ny fanondranana antsokosoko hazo sarobidy. Anisan’nylehibe indrindra sady nahafantarana ny minisitra Harimisa Noro Vololona koa anefa nyhetsika fanadiovana eo anivon’ny tontolon’ny fitsarana. Eo, ohatra, ny famerenana nyfanajana fitsipika, toy ny fanajana fotoana.Nodiovina koa ny ao amin’ny ENMGTsy vitan’izany. « Nisy ny lesoka sy ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fifaninananahidirana eo anivon’ny sekoly ENGM. Efa tafapetraka ny fitantanana sy ny rafitrahampangarahara ny fifaninanana, manomboka izao. Niantsoana manampahaizana ny lesokatamin’ny lafiny informatika tamin’ny fanadinana. Efa voahitsy izany izao ka hisy fanaraha-maso ataon’ny tompon’andraikitra iray manomboka amin’ny fisoratana anarana ho an’nympiadina, mandalo amin’ny laza adina ahitana marika manokana ka hatrany amin’nyfarany », hoy ihany izy. Na izany aza, tsy mbola fantatra ny fotoana hanaovana indray nyfifaninanana hidirana eo anivon’io sekoly ho an’ireo hianatra ho mpitsara sympirakidraharaha (ENMG) io. « Mbola hiova ny fitondrana ka miankina amin’izany ny hoTohiny », hoy ny minisitra.Synèse R.
Previous articleMadagascar – Fanadiovana eo anivon’ny fitsarana – Am-polony ireo mpitsara, mpiraki-draharaha ary mpandraharahan’ny fonja vosazy mafy – Ao raha du 16 janvier 2019
Next articleRapt meurtier d’Annie et d’Arnaud, transfert de Roger Lala Stéphanie condamnée à pertpétuité à la prison d’Antsiranana – Expressmada du 17 janvier 2019